Shiinaha boorsooyinka Customized-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada isboortiga > Boorsooyinka ugaarsiga
1) Waxaan sameyn doonaa waxkasta oo macquul ah si aan kaaga badbaadino kharashyadaada. (2) Waxaan xiriiri doonaa 24 saac. Waxaan u isticmaali doonnaa isgaarsiin hufan si loo hubiyo isgaarsiinta macluumaadka oo habsami leh. (3) Ka dib markii muunadda la iibiyo, haddii nooca ugu horreeya loo baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan ku beddeleynaa muunadda sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamka oo dhan ee soo saarista nooca labaad ee muunadku waa gebi ahaanba bilaash. (4) Sanduuqayaga shirkadda ayaa si joogto ah u shaqeynaya oo ay ka shaqeeyaan shaqaale xirfadlayaal u ah adeegga macaamiisha. Waad noo soo qori kartaa talo iyo cabasho wakhti kasta. Waxaan u aqrin doonnaa una soo jawaabi doonnaa si hufan oo taxaddar leh. (5) Waxaan si adag u xakamayn doonnaa tayada badeecadaha oo waxaan kuu soo gudbin doonnaa adiga oo ku qaadanaya heerka 100%.
1. Soo bandhigida alaabada boorsada ugaarsiga:
(1) Dharka kahortaga jeexjeexa: Waxaa la dhihi karaa waa sheyga ugu fiican ee boorsooyinka taatikada. Caabbinta ilmada ayaa ah mid aad u adkaysi badan oo jeexjeexa waxayna ka caawisaa ka hortagga ilmada inuu ku faafo. Soosaarayaasha boorsooyinka ayaa si sii kordheysa u isticmaalaya Ripstop Fabric si loo hagaajiyo tayada wax soo saarka.
(2) Boorsadeena ugaarsiga waxay adeegsaneysaa nidaam mesh mesh neefsan kara, kaas oo si wax ku ool ah uga caawin kara kala-baxa kuleylka xagga dambe iyo ilaalinta hawo-qaadashada.
(3) Si loo daboolo baahida loo qabo qalabka ugaarsiga, waxaan qaabeynay awood ballaaran.
(4) Kani waa xulasho aanad ku riyoon karin inaad iska ilowdo. Waa lagama maarmaan in la doorto mid ka mid ah boorsooyinka ugaarsiga ugu fiican ee ku habboon dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah ee aad ugu baahan karto xiisahaaga.
(5) Inta badan boorsooyinka ugufiican waxay leeyihiin qaabab badan oo jeebado ah ama qaybo ah si ay alaabtaadu u fududaato in si dhaqso leh loo helo. Waxaa badanaa loogu talagalay qalab cimilada u adkaysta si looga ilaaliyo walxaha wixii waxyeelo ah.
(6) Marka, sidee baan ku go'aansan karnaa boorsada ugaarsiga ugu fiican si loo daboolo baahiyahaaga? Waxaan sameynaa isbarbardhigyo badan, akhrinaa dib u eegista macaamiisha waxaanan miisaannaa faa'iidooyinka iyo qasaaraha.
(7) Tani waa waxa aan helnay markii aan raadineynay boorsada ugaarsiga ugu fiican ee lacagta. Waxaan rajeyneynaa in tusaha iibsadaha uu kaa caawin doono inaad hesho boorsadaada ugaarsiga ee ugu habboon.
2. Xuduudaha alaabta (qeexitaanada) boorsooyinka ugaarsiga
1200D nylon lo'da aan biyuhu lahayn Zimbu
Dhererka 45cmX Width 32cmX Dhererka 20cm
3. Sidee loo doortaa boorsada ugaarsiga ugu fiican?
(1) Marka hore tixgeli cabirka boorsada ugaarsiga: Markaad dooranayso boorsada ugaadhsiga, waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso waa cabbirka aad u baahan tahay. Guud ahaan, waa fikrad fiican inaad keento boorso ka yar intaad u baahan tahay. Tani waxay kugu dhiirigelin doontaa inaad keento waxa aad u baahan tahay oo keliya, oo aanad xirxirin. Si kastaba ha noqotee, haddii aad qorsheyneyso inaad ugaarsato qoto dheer kaynta, oo laga yaabo inay qaadato dhowr maalmood markiiba, waxaad u baahan kartaa boorso ka weyn. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad tixgeliso cabbirka baakadka ee ku habboon jirkaaga. Baakaduhu waa inay u dhow yihiin jirkaaga sida galoofyada. Hadday aad u weyn tahay, baakaduhu waxay noqon karaan kuwo aan dheellitirnayn oo aan ku habboonayn in lagu qaado masaafo dheer.
(2) Qalabka iyo adkeysiga boorsada ugaarsiga ugu fiican ayaa loo baahan yahay in laga fiirsado. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay: waxa labaad ee ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso waa maadada boorsada ugaadhsiga iyo adkaysiga boorsada. Waxaad dooneysaa boorso la isticmaali karo xilliba xilli. Qofna ma kharibi doono dhawrka jeer ee ugu horreeya ee aad isticmaasho. Ama ka xun xilli ka dib. Markaad daawaneysid boorsada ugaarsiga, hubi inaad hubiso haddii maaddadu leedahay mid ka mid ah howlaha soo socda.
(3) Ku safridda hubka: Markaad dooranayso boorsada ugaarsiga, waxa ugu dambeeya ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso waa hubka aad isticmaali doontid. Kaliya qaado qaanso ama qori tusaale ahaan. Maanta, inta badan boorsooyinka loogu talagalay ugaarsiga waxaa lagu qalabeeyaa suumano (qaanso ama qoryo) ama daboollo dabool ah oo loogu talagalay qoryaha. Haysashada shandad hub qaadan kara waa faa iido weyn. Waxay sii deyneysaa gacmahaaga, waxay qaban kartaa hawlo kale, waxayna kuu ogolaaneysaa inaad hubka si ammaan ah u qaadatid intaad ku dhex turunturoodeyso kaynta.
(4) Xidhmada jir / dibedda: Arrin kale oo ay tahay inaad tixgeliso ayaa ah inaad haysato boorsada gudaha, dibedda ama shaashad la'aan. Mid waliba wuxuu leeyahay faa iidooyin iyo qasaaro u gaar ah. Wareegyada gudaha ayaan ku habboonayn in hilib badan laga soo jiido duurka, laakiin waxay leeyihiin faa iidooyin dheeraad ah oo ah inay noqdaan kuwo yar oo raaxo leh, waxayna caawiyaan yareynta daalka murqaha. Haddii aad qorsheyneyso inaad keento oo keliya shimbiraha ama dabagalaha, markaa qaabka gudaha ayaa aad u habboon. Dhinaca kale, looxyada dibadda waxay u muuqdaan kuwo culeys badan. Caadi ahaan waxay soo jiidan karaan waxyaabo badan. Haddii aad raadineyso elk, markaa waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo xirmo jir dibadda ah. Marka la barbardhigo qaabka gudaha ama dibedda, waxa ugu muhiimsan waa sida loo xirxiro boorsada ugaarsiga iyo sida loo qaado. Waxaad u baahan doontaa inaad ku dhejisid culeyska ugu culus bartanka boorsada si miisaanka loo qaybiyo uu ugu dhaco miskahaaga. Markaad ku sugan tahay dhul qallafsan, waa inaad alaab culus saartid sintaada si aad u kordhiso xarunta culeyska.
5. Xirxirida iyo gaarsiinta boorsooyinka ugaarsiga
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 45cm X 32cm X 20cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka
(3) faahfaahinta xirxirida: 47cm X 34m X 50cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 12Kg.
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 10.1Kg.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadeyn doonnaa xirmada boorsadaan ugaarsiga iyadoo loo eegayo shuruudahaaga.
(9) Haddii aad ubaahantahay shaybaarka shandaddan ugaarsiga, waxaan dooran doonnaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
Q3: Ma dooneysid naqshadeynta wax soo saarkayaga, ma sameyn kartaa waxna waad soo saari kartaa sida ku xusan sawirka qaabeynta?
Q4. Maxay yihiin shuruudaha lacag bixinta?
Q7. Waa maxay waqtigaaga hogaaminta ee wax soo saar ballaaran maalmo?
Q8. Muddo intee le'eg ayey tahay waqtiga hoggaaminta wax soo saarkaaga? Miyaad bixisaa shay-baarka? Ma bilaashbaa mise waa dheeri?
S9: Waa maxay wax soo saarkaaga waxsoosaarka badan?
(3) Waxaan nahay soosaaraha Disney boorsooyinka ugaarsiga, boorsooyinka Wal-Mart iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Calaamadaha kulul: Boorsooyinka ugaarsiga, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka